Iconical: ovao ny sary famantarana ny fitaovan'ny iOS tsy misy Jailbreak | Vaovao IPhone
Iconical: ovao ny sary famantarana ny fitaovan'ny iOS tsy misy Jailbreak
Ny fahafahany manova ny endrik'i iOS dia iray amin'ireo antony mahatonga ny olona maro Jailbreak. Ny fiovana hatsaran-tarehy lalina nomen'ny iOS 7 ho an'ny rafi-piasan'ny finday an'ny Apple dia namela zavatra betsaka noho ny afa-po, miaraka amina interface maoderina sy madio kokoa, lavitra ny skeumorphism an'ny kinova taloha. Fa ny hafa kosa mihorohoro fotsiny noho ireo sary masina vaovao napetrak'i Jony Ive tamin'ny iPhones sy iPads-ny. Rehefa misy a Jailbreak azo alaina ao amin'ny iOS 7, tsy hisy ny olana amin'ny fanaingoana ireo fitaovantsika indray, fa mandra-pahatongan'izay dia inona no hatao? Iconical, fampiharana handefa rahampitso ao amin'ny App Store Izy io dia hanome safidy hafa hahafahantsika manova ny sarin'ny rindranasanay.
Manararaotra ny "URL namboarina" ny fampiharana raha avela mamorona hitsin-dalana amin'ny birao izay mandefa ilay fampiharana mifanaraka amin'izany, ary ireo hitsin-dàlana ireo dia ahafahantsika manampy ireo sary masina izay tena tianay, na sary alaina amin'ny Internet na sary izay amoronay ny tenanay amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratra izay hampidiriny. Amin'ny alalàn'ity fomba ity dia azontsika atao ny manamboatra ireo rindranasa tiantsika ovaina tsirairay, mba hahazoantsika lohataona bebe kokoa araka izay tiantsika.
Araka ny hitanao, ny fomba fiasa dia tsy dia sarotra loatra, na dia haharitra kely aza isika, miankina amin'ny isan'ny rindranasa napetraka sy te hanova. Misy ihany koa ny fatiantoka kely, ary izany dia tsy ny rindranasa rehetra no hifanaraka amin'ireo "URL fanao" ireo, fa miantoka kosa ny mpandrindra fampiharana 200 mahery no hotohanana miaraka amin'ny Iconical. Ahoana no ahafantaranao hoe iza amin'ireo no hifanaraka? Iconical dia hanao izany ho anao amin'ny fotoana voalohany andefasanao ilay rindranasa, satria hizaha ireo rehetra napetrakao amin'ny fitaovanao hilazana aminao hoe iza no azonao ampanjifaina.
Tsy ho hita ny fangatahana raha tsy rahampitso 6 Aogositra. Raha vantany vao eo am-pelatanantsika izany dia aza misalasala fa hanana izany ianao famerenana feno sy tutoriall ny fomba fampiasana azy. Manantena aho fa mendrika izany satria mampanantena zavatra betsaka.
Fanazavana fanampiny - Tutorial amin'ny Jailbreak iOS 6 miaraka amin'ny Evasi0n
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Iconical: ovao ny sary famantarana ny fitaovan'ny iOS tsy misy Jailbreak
Tsy mino aho fa hanaiky azy ireo…. : S
Erick colin dia hoy izy:
Azoko antoka fa haharitra mandritra ny ora maro izy ireo ary hesorin'izy ireo. Ny olana iray hafa ananako amin'ny fomba fiasa dia: raha url mahazatra dia tsy hanokatra safari aloha izy ary avy eo ny fampiharana, raha izany dia ho mahatsiravina.
Valiny tamin'i Erick Colin
Tsy ho ela dia hamela fisalasalana isika.
Vehivavy mandoa $ 1500 amin'ny tranga iPhone roa miaraka amin'ny paoma ao anatiny
Ny fampiharana Apple Apple Store dia manome maimaimpoana ireo fampiharana voaloa